Imibuzo eyi-15 Okufanele Uyibuze Nge-API Yabo Ngaphambi Kokukhetha Ipulatifomu | Martech Zone
Umngane omuhle nomeluleki wabhala wangibuza umbuzo futhi ngingathanda ukusebenzisa izimpendulo zami kulokhu okuthunyelwe. Imibuzo yakhe ibigxile kakhulu embonini eyodwa (i-imeyili), ngakho-ke ngenze izimpendulo zami zaba yizo zonke ama-API. Ubuze ukuthi yimiphi imibuzo inkampani okufanele ibuze umthengisi nge-API yayo ngaphambi kokukhetha.
Kungani Udinga Ama-API?
An isikhombi sokuhlela ukusebenza sohlelo lokusebenza (API) i-interface enikezwa uhlelo lwekhompiyutha, umtapo wezincwadi, noma uhlelo lokusebenza ukuvumela izicelo zamasevisi zenziwe ngalo ngezinye izinhlelo zekhompyutha, kanye / noma ukuvumela idatha ukuthi ishintshane phakathi kwabo.
Njengoba uthayipha i-URL bese uthola impendulo ekhasini lewebhu, i-API iyindlela lapho amasistimu akho angacela futhi athole impendulo emuva ukuvumelanisa idatha phakathi kwabo. Njengoba izinkampani zibheka ukuziguqula ngokwamadijithi, ukwenza imisebenzi ngama-API kuyindlela enhle yokwenza ngcono ukusebenza kwenhlangano nokunciphisa iphutha lomuntu.
Ama-API aphakathi kokuzenzakalela, ikakhulukazi ezinhlelweni zokumaketha. Enye yezinselelo lapho uthengela umthengisi omkhulu onolwazi oluphelele API ngukuthi izinsizakusebenza zentuthuko nezindleko kuvame ukucatshangelwa ngemuva. Ithimba lokumaketha noma i-CMO ingashayela ukuthengwa kohlelo lokusebenza futhi kwesinye isikhathi iqembu lezentuthuko alitholi okokufaka okuningi.
Ukucwaninga amandla wokuhlanganiswa kwepulatifomu nge-API kudinga okungaphezu kombuzo olula, Ingabe ikhona i-API?
Uma ungena ngemvume ngohlelo lokusebenza nge-API engasekelwa kahle noma ebhalwe phansi, uzolihlanyisa iqembu lakho lokuthuthuka futhi ukuhlanganiswa kwakho kungenzeka kufushane noma kuhluleke ngokuphelele. Thola umthengisi ofanele, futhi ukuhlanganiswa kwakho kuzosebenza futhi abantu bakho bezentuthuko bazokujabulela ukukusiza!
Imibuzo Yokucwaninga Ngamakhono E-API Awo:
Faka igebe - Thola ukuthi yiziphi izici ze-Interface yazo yomsebenzisi etholakalayo nge-Application Programming Interface. Iziphi izici i-API enazo i-UI engenazo futhi okuphambene nalokho?
Scale - Buza ukuthi zingaki izingcingo ezenziwa kubo API nsuku zonke. Ngabe banechibi elizinikezele lamaseva? Ubungako bubaluleke ngendlela emangalisayo ngoba ufuna ukukhomba ukuthi ngabe i-API icatshangelwa ngemuva noma empeleni iyingxenye yecebo lenkampani.
Imibhalo - Cela imibhalo ye-API. Kufanele kube ngamandla, kupelwe zonke izici nokuhlukahluka okutholakala ku-API.
Community - Buza ukuthi ngabe banomphakathi Wonjiniyela oku-inthanethi otholakalela ukwabelana ngekhodi nemibono nabanye onjiniyela. Imiphakathi Yonjiniyela ingukhiye wokwethula imizamo yakho yokuthuthukisa nokuhlanganisa ngokushesha nangempumelelo. Esikhundleni sokusebenzisa 'umfana we-API' enkampanini, ubuye usebenzise wonke amakhasimende abo asevele enezivivinyo namaphutha ahlanganisa isixazululo sabo.
REST vs SOAP - Buza ukuthi hlobo luni API bane… Ngokuvamile kune-REST APIs ne-Web Service (SOAP) APIs. Kungenzeka ukuthi bakhula bobabili. Ukuhlanganisa noma yikuphi kunenzuzo neziqalekiso… kufanele wazi ukuthi amakhono akho wokuhlanganisa '(IT) angakanani.
Izilimi - Buza ukuthi yimaphi amapulatifomu nezinhlelo zokusebenza abazihlanganise ngempumelelo futhi ucele oxhumana nabo ukuze uthole kulawo makhasimende ukuthi kwakunzima kanjani ukuhlanganisa nokuthi i-API isebenza kanjani kahle.
Ukulinganiselwa - Buza ukuthi imiphi imingcele umthengisi anayo ngezinombolo zezingcingo ngehora, ngosuku, ngesonto, njll. Uma ungekho kumthengisi ongenakulinganiswa, ukukhula kwakho kuzokhawulelwa yikhasimende.
Amasampula - Ngabe banikeza umtapo wolwazi wezibonelo zekhodi ukuze uqalise kalula? Izinkampani eziningi zishicilela i-SDK (Software Development Kits) yezilimi ezahlukahlukene nezinhlaka ezizosheshisa umugqa wakho wesikhathi wokuhlanganisa.
I-Sandbox - Ingabe banikela ngendawo yokugcina engakhiqizi noma indawo ye-sandbox ukuze uvivinye ikhodi yakho kuyo?
Izinsizakusebenza - Buza ukuthi ngabe bazinikele yini izinsiza zokuhlanganisa ngaphakathi kwenkampani yabo. Ngabe baneqembu lokubonisana langaphakathi elitholakalayo lokuhlanganiswa? Uma kunjalo, phonsa amahora athile kusivumelwano!
Security - Bakuqinisekisa kanjani ukusebenzisa i-API? Ingabe yimininingwane yomsebenzisi, okhiye, noma ezinye izindlela? Bangakwazi ukukhawulela izicelo ngekheli le-IP?
Isikhathi sokuphumula - Buza ukuthi yini yabo API isilinganiso sesikhathi sokuphutha nephutha, futhi lapho amahora wokugcinwa kwawo ekhona. Futhi, amasu okusebenza abakuzungezile abalulekile. Ngabe banezinqubo zangaphakathi ezizozama kabusha API izingcingo uma kwenzeka irekhodi lingatholakali ngenxa yenye inqubo? Ngabe lokhu yinto abayicubungule enkingeni yabo?
I-SLA - Ingabe banayo i- Isivumelwano Sezinga Lenkonzo lapho izikhathi kufanele zibe ngaphezulu kwama-99.9%?
Umgwaqo wendlela - Yiziphi izici zesikhathi esizayo abazifaka ku-API yabo futhi yiziphi izinhlelo ezilindelekile zokulethwa?
Ukuhlanganiswa - Yikuphi ukuhlanganiswa okukhiqizwayo abakusungulile noma abantu besithathu abakwenzile? Kwesinye isikhathi, izinkampani zinganciphisa ukuthuthukiswa kwangaphakathi kuzici lapho okunye ukuhlanganiswa komkhiqizo sekuvele kukhona futhi kuyasekelwa.
Ukhiye wale mibuzo ukuthi ukuhlanganiswa 'kukushada' endaweni yesikhulumi. Awufuni ukushada nomuntu ngaphandle kokwazi okuningi ngangokunokwenzeka ngaye, akunjalo? Lokhu kwenzeka nje lapho abantu bethenga ipulatifomu ngaphandle kolwazi lwamakhono abo wokuhlanganisa.
Ngaphandle kwe-API, kufanele futhi uzame ukuthola ukuthi yiziphi ezinye izinsizakusebenza zokuhlanganisa abangaba nazo: Ukubhaka, ukwenza imephu, izinsizakalo zokuhlanza idatha, i-RSS, Amafomu eWebhu, amawijethi, ukuhlanganiswa okusemthethweni kozakwethu, izinjini zokubhala, amaconsi e-SFTP, njll.
Tags: Apiimibhalo ye-apiukuhlolwa kwe-apiapi iziciimibuzo apiucwaningo lwe-apiisikhombi sokuhlela ukusebenzaiziciukuphumulai-sandboxsdkisivumelwano sezinga lesevisi
Mar 29, 2021 ku-11: 44 AM
Okuqukethwe okuhle njengoDoug njalo!
Mar 29, 2021 ku-11: 47 AM
Ngiyabonga kakhulu, Jon! Hlala umazisa umuntu othatha isikhathi ukushiya inothi elinomusa.
Aug 5, 2021 ku-3: 37 AM